NAXDIN: Jamaahiirta Arsenal Oo Wadnaha Farta Ku Haya, Kabtan Aubameyang Oo Dhaawacmay & Fursadiisa Kulanka Man City - Gool24.Net
NAXDIN: Jamaahiirta Arsenal Oo Wadnaha Farta Ku Haya, Kabtan Aubameyang Oo Dhaawacmay & Fursadiisa Kulanka Man City
Kooxda ree London ee Arsenal ayuu soo food-saaray wer-wer weyni kaddib markii la ogaaday inuu xaalad dhaawac dhexda kaga jiro kabtanka kooxdeeda ee Pierre Emerick Aubameyang isla markaana uu halis ugu jiro inuu seego kulanka Man City.
Gunners ayaa kahor tagi doona kooxda Pep Guardiola marka uu dib u furmo Premier League ee laga soo laabto kulamada caalamiga ah iyagoo isha ku haya inay sii wadaan qaabka xoogan ee ay ku bilawdeen horyaalka.
Kooxda tababare Mikel Arteta ayaa soo guuleysatay saddex kamida afartii kulan ee ay kasoo ciyaareen horyaalka iyagoo booska afraad ee miiska kala sarreynta ku jooga farqiga goolasha.
Aubameyang ayaa ahaa mid aamusan oo aan garoonka sidii hore ugu saamayn badnayn marka la eego heerkiisa caadiga ah maadaama oo uu hal gool iyo hal caawimo ilaa hadda soo sameeyay.
Aubameyang ayaa tartan la geli doona wakhtiga si uu taam buuxa ugu noqdo kulanka ay Etihad Stadium tagayso kooxdiisu iyadoo hadda gabi ahaanba laga saaray liiska xulkiisa Gabon ee kulamada caalamiga ah.
“Aubameyang waxa uu la dhibtoonayaa dhaawac yar oo canqawga ah oo gaadhay Axadii intii uu socday kulankii Premier League ee ay Sheffield kahor tageen” ayuu yidhi tababaraha xulka qaranka Gabon ee Partice Neveu.
Mustaqbalka Aubameyang ayaa ahaa mid bilooyin kahor cirka ku shareernaa iyadoo bixitaan lala xidhiidhinayay balse 31 sano jirkan ayaa mustaqbalkiisa u hibeeyay Gunners isaga oo heshiis cusub oo saddex sano ah u saxeexay.
Fursada Auba ee kulanka City ayaa ku xidhnaan doonta soo kabashadiisa, sida uu sheegay tababaraha Gabon dhaawaciisa ayaa ah mid yar.